CHIME na Nextstrain: Ihe Omume Na-emeghe Maka Ahụ Ike | Site na Linux
CHIME na Nextstrain: Ihe Omume Na-emeghe maka Ahụ Ike
CHIME na Nextstrain: Ihe Omume Na-emeghe maka Ahụ Ike Mmadụ
CHIME na Nextstrain bụ 2 ezigbo ihe atụ, nke otú Free Software na Open Source, ha nwere a nnukwu uru bara uru na-enye, ọtụtụ ugboro ukwuu karịa yiri Nkeonwe Software na Emechiela Code oru ngo, ọ bụghị nanị na nkà na ụzụ ubi kamakwa na nkà mmụta sayensị na ubi na karịsịa na ubi nke Ahụike mmadụ.
Ndị a magburu onwe Nlekọta Ahụike dị ugbu a, iji rụkọta ọrụ na ọgụ a Covid-19, nke taa na-ewute onye Ndi mmadu, rụkọta ọrụ na arụ ọrụ ma ọ bụ njikwa na otu esi emeso oria a na oria ndi ozo na ulo ogwu na ulo ogwu, dika akụkụ nyocha, nke ahụ bụ, n'ọhịa nke nghọta nke epidemiological iji nyere aka belata ma wepụ ihe kpatara na nsonaazụ nke ọrịa.
Dịka anyị gụrụ na ọkwa ndị ọzọ gara aga, Open Source Projects maka Ahụike Mmadụ ma ọ bụ karịsịa lekwasịrị anya Na-alụso COVID-19 ọgụ enwere ọtụtụ, n'etiti nke ọ bara uru ikwu GNU Ahụike na OpenEMR maka ikpe mbu, dika la GISAID Initiative, sọftụwia ahụ ékpè, Mesh Mgbakọ Mgbakọ N’esogide @ ulo y Rosetta @ ulo maka okwu nke abuo.
Ya mere, taa anyị ga-eme nsọpụrụ ikwu banyere ya CHIME na Nextstrain.
1 CHIME na Nextstrain: Ihe Omume Na-emeghe
CHIME na Nextstrain: Ihe Omume Na-emeghe
Su ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, na-akọwa ya dị ka ndị a:
"Ezubere ngwa CHIME (COVID-19 Hospital Impact Model for Epidemics) iji nyere ụlọ ọgwụ na ndị ọrụ ahụike ọha aka ịghọta mkpa ikike nke ụlọ ọgwụ n'ihe metụtara ọrịa COVID. CHIME na-enyere ikike ime atụmatụ site n’inye atụmatụ nke ngụkọta kwa ụbọchị (yabụ nke ọhụrụ) yana ngụkọta na-aga n’ihu (ya bụ ọnụ ọgụgụ) nke ndị nọ n’ụlọ ọgwụ, ndokwa ndị ICU, na ndị ọrịa chọrọ ikuku. A na-eme atụmatụ ndị a site na iji usoro SIR (nke nwere ike ibute, butere oriọna, nwetaghachiri), usoro ihe atụ nke usoro epidemiological.".
Ya mere, isi mma mmetụta nke CHIME n'ọgụ Covid-19 ọ bụ ikwe na ịkwado imerime mmadụ na / ma ọ bụ gọọmentị ịkwadebe ụlọ ọgwụ ha, obodo na mpaghara maka nsogbu ha na-eche ihu ma ọ bụ na-echere ha. Kpọtụrụ ndị ọrụ ya ohere, buru amụma banyere ọnụọgụ a na-atụ anya nke ndị ọrịa ụlọ ọgwụ na nnabata kwa ụbọchị nke mere na ha nwere ike ikwu oke mmetụta nke ọnọdụ ha na oge ha ga-achọ inwe usoro mgbochi na ebe.
Matakwu banyere CHIME ị nwere ike ịnweta gị na ebe nrụọrụ weebụ na GitHub.
“Nextstrain bụ ihe na-emepe emepe iji mepụta ikike sayensị na ahụike ọha na eze nke data genome data. Anyị na-enye nlele emelitere na-aga n'ihu nke data dị n'ihu ọha yana ihe ngosi dị ike na ngwaọrụ nyocha iji mee ihe nke obodo. Ebumnuche anyị bụ inyere nghọta nke ọrịa aka ma meziwanye nzaghachi maka ntiwapụ ”.
Ya mere, isi ebumnobi nke Osote bụ inyere ndị ụlọ ọrụ ọha ma ọ bụ nkeonwe aka, ma ọ bụ iji debe ndekọ dị irè ma dị irè nke ezigbo oge evolushọn nke ọ bụla pathogen, tumadi ugbu a, Covid-19 nke ahụ na-ebute oke ọgba aghara n’ụwa.
Matakwu banyere Osote ị nwere ike ịnweta gị na ebe nrụọrụ weebụ na GitHub.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a 2 «Proyectos de Código Abierto en pro de la salud» akpọ «CHIME y Nextstrain», nke bụ nnukwu nkwado ma dị mkpa n'oge ndị a siri ike nke mmadụ chere ihu n'ụwa niile, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka mmadụ niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » CHIME na Nextstrain: Ihe Omume Na-emeghe maka Ahụ Ike
Gọọmentị COVID-19 nke Google dị njikere ugbu a